प्रहरीद्धारा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार
नेपाल पत्रकार महासंघ बैतडी शाखाका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्ट तथा महासंघका केन्द्रिय पार्षद गोकर्ण दयालमाथि गोठालापानी प्रहरी चौकीका प्रहरी हवल्दार मोहन विष्टले दुव्र्यवहार गरेका छन् । गएराती गोठालापानी बाट घरतर्फ फर्कदै गर्दा हवल्दार विष्टले फोन गरेर बोलाई दुव्र्यवहार गरेको पत्रकार दयालले बताउनुभयो । हवल्दार विष्टले फोन गराई बोलाएको र नियन्त्रणमा लिई गोठलापानी बजारमै दुव्र्यवहार गरेको दयालले जानकारी दिनुभयो । हवल्दार विष्टले भट्ट र दयाललाई ठूलो पत्रकार हुने भन्दै धम्क्याएका थिए । घटनाप्रति नेपाल…
Added by रोशन भण्डारी on April 30, 2013 at 6:27pm — No Comments
विद्युतका जिर्ण पोल विद्युतीय धराप बन्दै
बैतडीको सदरमुकाम तथा जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतका पोल खिया तथा कुहिएर ढल्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विद्युत कार्यालयले नयाँ पोल नराख्दा पोल ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्युत कार्यालयले बजेट अभावमा फेर्ने पैसा नभएको वताउदै खिया लागेका फलामे पोल तथा पुराना कुहीएका काठका पोल फेर्न नसक्दा विद्युतिय पोल नै धरापमा परेका छन् ।
दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण ओहर दोहर हुने सदरमुकामका शाहिलेक गोठलापानी गडी बजारमा रहेका पोलमा खिया लागेर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने ग्रामिण भेगमा रहेका…
Added by रोशन भण्डारी on April 30, 2013 at 8:00am — No Comments
इजरायलमा बस्ने नेपालीको सहयोग
बिगत १५ बर्ष देखि बालबालिका महिला र बृद्धहरुको लागि कामगरिरहेको संस्था पबित्र समाज सेवा नेपाललाई इजरायलमा बस्ने नेपाली नवराज आचार्य र उनको समुहले एकलाख चालिस हजार एकसय एक रुपैया सहयोग गरेको छ । यसैगरि यसै कार्यक्रममा हेल्प नेपाललाई पनि एक लाख पन्ध्रहजार आठ सय एघार रुपैँया हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममा कलाकार हरिवंश आचार्यले दुवै संस्थालाई रुपैया हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । पवित्र समाज सेवा नेपालकी दिक्षा चापागाई तथा हेल्प नेपालका रबिन्द्र मिश्रलाई उक्त्त रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो…
Added by Kabita on April 29, 2013 at 9:00pm — No Comments
मेडिकल सिटीमा उपचारको खडेरी
शीर्षक पढेर तपाईँ अचम्ममा पर्नु भयोहोला, होइन त? हो, शीर्षक जस्तै यहाँको काम पनि अचम्मकै छ । तर यो नयाँ कुरा भने होइन, तपाईँ हामी सबैजनाले भोग्दै आएको पिडाको प्रतिनिधि घटना मात्र हो यो, जे म लेख्न जाँदैछु । यी र यस्ता घटना धेरै ठाउँमा घट्ने गरेका छन् ।
नेपालको ७६ औँ जिल्लाको रुपमा परिचित तथा नेपालको प्रस्तावित बैकल्पिक राजधानी चितवनको हो । अझै चितवनको भरतपुर नगरपालिका त मेडिकल सिटीको रुपमा विकशित शहर पनि हो । यसलाई मेडिकल सिटीको नामले चिनाइनुपर्छ भन्दै यदाकदा हिँडेको हामीले…
Added by आनन्द पोखरेल on April 29, 2013 at 6:00am — No Comments
जे बनायो जिन्दगीले ( विवश एल्बम)
Added by Hari Manandhar on April 28, 2013 at 11:19pm — No Comments
किन? विवशको एउटा गजल
अंधकारमा चम्किदिने जूनसँग दाग किन?
टल्किने ती सबै तिम्रा काला मेरो भाग किन?
जहाँ जे छ. त्यहि भोग्छु भन्दै वाचा दिने तिमी
अहिले सबै वाचा भुल्दै, यो दे त्यो दे माग किन?
ब्रम्हा, बिष्णु, महेश्वर भन्दै पुजा गर्ने तिमी
सुस्त-सुस्त बन्दै गए तिम्रो लागि नाग किन?
डाँडाकाँडा घुम्दा डुल्दा, भन्थ्यौ मैना…
Added by Hari Manandhar on April 28, 2013 at 11:00pm — No Comments
के काम भो? विवशको गजल
अन्धो छु आफै म, परीको के काम भो?
छाडेर जाने त्यो, चरीको के काम भो?
बाँच्नुको अर्थमा भोगाई हो जिन्दगी
हिलो मै फुल्या’छु, झरीको के काम भो?
मरेको आत्मा छ, निरस यो शरीरलाई
अमृत घटिका भरिको के काम भो?
क्षितिज पारीको बेग्लै छ सँसार
इन्द्रको स्वर्गमा हरिको के काम भो?
हरि मानन्धर "विवश"
त्यो मन्दिरमा... (गजल)
बगैँचाको सुन्दर फूल, सुकायौ त्यो मन्दिरमा
जिन्दगीको अस्तित्व नै लुकायौ त्यो मन्दिरमा
गल्ति हुन्छ मान्छेबाट, माफी किन माग्छौ त्यहाँ
मनभित्रको लाक्षीपना, चुकायौ त्यो मन्दिरमा ।…
Added by Hari Manandhar on April 28, 2013 at 10:30pm — No Comments
टुक्रेको मुटु चर्केको सिसा जोड्न सकिन प्रिय
मायाको मूल ,प्रीतिको फुल गोड्न सकिन प्रिय
सबको सामु तिमि त गयौ तोडेर माया
घायल तन पागल मन मोड्न सकिन प्रिय
अतित सम्झी बाडी आउदा सपनाको लहर
तिम्रो हासो ,आखाको नासो छोड्न सकिन प्रिय
Added by Milan Neupane on April 28, 2013 at 9:55pm — No Comments
दबाइएका स्वरहरु !
एउटा चरित्र हुन्छ; हजारौ झुट छिनाल्दै त्यो स्वर बल्झिन्छ । आज गुन्जायमान मौसमको पर्खाइमा बसिरहेका स्वरहरुको यहाँ हत्या गर्ने चलन बढ्दो छ । ति पिडाका स्वर, ति आक्रोशका स्वर, ति बेथितिमा बल्झिरहेका चित्कारहरु; ति घुँडा टेक्दै मौलाइरहेका खयालहरुलाई यहाँ दबाउने दौरानमा दशाको दिशामा दाह गरिन्छ । हिजो अस्तीको चोरि-चकारि गरिरहेको चोरलाई त्यो समाजले नै आदर्शताको गफ लगाइ भावना र विचारमा डुबायो । उसले हिजोको भरमा शायदै आज गुण्डागर्दी र बन्दुकको भरमा दबाइएका स्वर…
Added by Surendra Kumar Bohara on April 28, 2013 at 2:00pm — No Comments
स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचार प्रभावकारी नभएको गुनासो
गर्मी यामसंगै झाडापखाला लगायतका रोगहरु फैलिने भएकोले त्यसको रोकथामको लागि विशेष सतकर्ता अपनाईने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । झाडापखालाजन्य रोगबाट अझै पनि थुप्रै व्यक्ति प्रभावित भईरहेकोले त्यसको राकथामको लागि सर्तकता अपनाएर अघि बढ्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख झपट ढुंगानाले बताउनु भयो । रेडियो रामारोशनको शनिबारको बहसमुलक कार्यक्रम सुदूर सवालमा बोल्दै निमित्त प्रमुख ढुंगानाले जिल्ला तहमा पनि तत्काल कार्य समुह (र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम) गठन गरिएको र गाउँ तहमा पनि…
Added by Purna Bahadur Khadka on April 28, 2013 at 1:00pm — No Comments
अछामका विकट गाविसमा एकिकृत घुम्ति शिविरका लागि टोलि गाउँतर्फ ।।
ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई गाउँठाउँमै गएर सेवा दिन थालिएको एकीकृत घुम्ती सेवा शिविरका लागि जिल्लाको टोलि हिजो गाउँतर्फ गएको छ । बैशाख १५ गते देखि जेठ १७ गतेसम्म संचालन गरीने गरी एकीकृत घुम्ती शिविरको मिति तय गरे अनुसार शुरुमा जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रमा रहेको ३२ कोष टाढा रहफ गाविसमा टोलि गएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय टोलि हिजो त्यसतर्फ गएको हो । रहफ गाविसमा बैशाख १५ गते देखि १८ सम्म शिविर संचालन हुनेछ भने जिल्लाको पायल गाविसमा पनि बैशाख १८ र १९ गते…
Added by Purna Bahadur Khadka on April 28, 2013 at 12:55pm — No Comments
अछाममा पहिलो पटक २६ जनाले रक्तदान गरे ।।
पूर्ण बहादुर खड्का, अछाम बैशाख १५
अछाममा पहिलो पटक हिजो साँफेवगरमा सामुहिक रक्तदान गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा साँफेवगरको आयोजनामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा २६ जनाले रक्तदान गरेका छन् । यस्तै सोहि कार्यक्रममा ३९ जनाले रक्त रमुह पहिचान गरेको रेडक्रस उपशाखा सभापति पदम बुढ्थापाले जानकारी दिनुभयो । रक्तदान गर्नेहरु सबै निरंकारी मिसनका सेवादलहरु रहेका छन् । बयलपाटा अस्पतालबाट गएको डाक्टर रोशन बिष्टको नेतृत्वमा गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले रगत संकलन गरेको हो । संकलित रगत बयलपाटा…
Added by Purna Bahadur Khadka on April 28, 2013 at 12:54pm — No Comments
अछाम जिल्लामा अबैध हतियारको संख्या २ सय ४ पुग्यो ।।
गृह मन्त्रालयले अबैध हतियार प्रहरीलाई बुझाउन सर्वसाधारणका लागि जारि गरेको पछिल्लो एक महिनाको अवधि सकिनै लाग्दा प्रहरीलाई हतियार बुझाउने क्रम बढेको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको सुरुको एक महिनाको समयावधिमा न्यून संख्यामा संकलन भएका अवैध हतियारहरु गृह मन्त्रालयले पछि थप गरेको समयमा भने दिनप्रतिदिन प्रहरीलाई बुझाउने क्रम बढेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका अनुसार हिजोसम्म जिल्ला बिभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दुई सय चार नाल भरुवा बन्दुक बुझाईएको छ । अलिेसम्म…
Added by Purna Bahadur Khadka on April 28, 2013 at 12:51pm — No Comments
हेटौंडाका होटेलमा मनपरी भाडा, खोइ त अनुगमन !
सामान्य दिनमा एउटा राम्रो होटलमा एउटा कोठाको भाडा कति रूपैयाँ तिर्नुपर्छ ? जो कोहीले पनि सजिलै भन्दछन् त्यस्तै रू. पाँच सय देखि १ हजारसम्म तिर्ने हो भने त राम्रो होटेलको कोठा पाइन्छ । तर यो कुरा बैशाखको १३ गते हेटौंडामा देखिएन । कारण थियो लोक सेवा आयोगको नायव सुब्बाको परीक्षा ।
सामान्य अवस्थामा सुनसान हुने हेटौंडाका सबैजसो होटलहरु यो समयमा खचाखच भरिएका थिए । होटलमा कोठाको भाडा पनि एकै पटक मनपरि रुपमा असुल्न खोज्दै थिए । जस्तो सुकै सानो तथा ठूलो होटलमा पनि कोठा खाली नभएको जानकारी…
Added by आनन्द पोखरेल on April 28, 2013 at 8:00am — No Comments
अस्पताल बसाइ अनि गाउँघरको सम्झना
घर छोड्दा आमाले भन्नु भएको थियो, ‘स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु । बाहिर गएपछि आफ्नो भन्ने कोही हुन्न । विरामी पर्दा तातो पानी खुवाउने सम्म कोही भेटिन्न । त्यसैले सबैभन्दा बढि महत्व स्वास्थ्यलाई दिनु ।’ त्यसैले आएको दिन देखि कतै बिरामी परिएला कि भन्ने साह्रै डर लागी रहन्थ्यो । यहाँ सबैका लागि स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गराइएकोले मैले पनि स्वास्थ्य विमा गराएको थिएँ । विमाले उपचार खर्च व्यहोर्ने भएकाले खर्चको भने उति डर थिएन तर चिसो मौसमका कारण विरामी परिने साह्रै…
Added by Raman Paneru on April 27, 2013 at 5:00am —4Comments
पोल्ट्रीमा बैंकको अर्ब बढिको लगानी
बर्डफ्लुको मारमा किसान ः क्षतिपूति न्यून
नारायणगढ । पोल्ट्रीको राजधानी भनेर चिनिने चितवनमा पछिल्लो केही सातायता कुखुरापालक किसान तथा व्यवसायीलाई बर्डफ्लुले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । पाँच जना किसानलाई…
Added by अल्टर कान्छो’ on April 27, 2013 at 12:20am — No Comments
सांस्कृतिक पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रहरु ओझेलमा ।।
चन्द्रा बुढा बैशाख १३
उचित संरक्षण र सम्बर्धनको अभावमा बझाङ्ग जिल्लाका अधिंकाश सस्कृतिक पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रहरु ओझेलमा परेका छन् । जिल्लाका महत्वपुर्ण मानिएका सुर्माताल, सुर्मासरोवर, खप्तड, बड्डीज्याबन, बित्थड, रिसीकुण्ड, तपोवन, कैलासगुफालगायतका दर्जनौ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रहरुको विकासका लागि सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रले चासो नदेखाएपछि ओझेलमा परेका हुन् । ती क्षेत्रहरुको विकासका लागि कुनै पनि ठोस योजना नबनाईंदा दिन प्रतिदिन तिनीहरुको महत्व घट्दै गईरहेको छ । ती…
Added by Chandra Budha on April 26, 2013 at 11:37am — No Comments
नदिमा करेन्ट छोडेर माछा मार्दै
बाजुराका नदीमा करेन्ट छोडेर माछा मार्ने क्रम दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । जिल्लाको ठुलो नदि बुढिगंगा, बाह्रविसको इकडीगाड, कुल्देवमाण्डौंको बार्जुगाड र तोलीको काँसागाडमा स्थानीय बासिन्दाहरुले करेन्ट लगाएर माछा मार्ने गरेको स्थानियले बताएका छन् । सोलारको ब्याट्रि वा अन्य ब्याट्रि बिजुलीमा चार्ज गरेर नदिमा करेन्ट छोडेर माछा मार्ने गरेको खुल्न आएको छ । करेन्टको प्रयोग पछि खोलामा रहेका माछा लगायत अन्य जलचरको समेत मर्ने गरेका छन् । बुढिगंगा नदि गुदुखातीबाट बग्ने बार्जुगाड…
Added by Purna Bahadur Khadka on April 26, 2013 at 11:37am — No Comments